Inona ny fototry ny fahomiazanarao na ny tsy fahombiazanarao? Mba lazao hoe izay azo lazaina ho fitaratra na ho fampitandremana ny hafa.
Date: 28 janvier 2016 - 08:48
OBJECTIVITE - DETERMINATION - PERSEVERANCE
Ireo no toko telo mahamasa-mahandro nampiariko tamin'ny fiainana.
- ny olona tsy manana tanjona na tsy mametraka tanjona eo amin'ny fiainana dia tsy lasa lavitra (OBJECTIVITE).
- Tsy azo atao ihany koa ny mafana fo am-boalohany kanefa milavo lefona avy eo fa rehefa natomboka dia tsy maintsy faranana (DETERMINATION).
- Tsy miovaova tanjona isaky ny mietsika ary tsy tokony ho mora kivy fa mitraka hatrany na inona zavatra misy (PERSEVERANCE).
Tratrako ny tanjona nokinasako na dia somary tara ara-potoana aza. Ny anton'ny fahatarana hoy ianao? Tsy nahay nampifandanja ny REVY sy ny MAHASOA aho tamin'ny fotoana iray toa nahazoako fahalalahana tanteraka manao izay tiako atao. Hany ka niantraika tamin'ilay tanjona napetrako izany. Taona maro taty aoriana vao tratrako ilay tanjona napetrako vokatr'izay. Ny mba hafatra apetrako dia
- mahaiza makajy ny fotoana anananao.
- Mahaiza mandanjalanja ny mahasoa sy ny mahafinaritra, ataovy aloha ny mahasoa fa ny mahafinaritra hoavy ihany.
- Apetraho ny tanjona, na fohy ezaka na lavitr'ezaka.
SOYONS OPTIMISTES. Mahereza daholo fa ady ny fiainana.
Re: Inona ny fototry ny fahomiazanarao na ny tsy fahombiazanarao? Mba lazao hoe izay azo lazaina ho fitaratra na ho fampitandremana ny hafa.
Date: 28 janvier 2016 - 11:18
Saika tsy fantatro ilay hoe "fahomiazanarao na ny tsy fahombiazanarao?". Mety diso tsipelina angamba fa fahombiazana no tiana hotenenina eto
Ny toko teloko kosa dia : Vola, Relation, fahaizana
Tsy very mandeha ny olona manana izy telo ireo na ny roa amin'izy ireo farafaharatsiny.
Raha iray fotsiny no ananana dia sarotra be ny hahatafavoahana e! Ohtra, raha manana vola fotsiny kanefa tsy manana ny fahaizana mitantana azy na tsy manana relation ahafahana mampiasa azy araka ny tokony ho izy dia tsy tafavoaka.
Raha manana fahaizana moa kanefa tsy misy relation fa mitokona fotsiny ao an-trano sady tsy misy vola dia tsy tafa koa e!
Date: 28 janvier 2016 - 13:02
Fifehezan-tena(DISCIPLINE) - fikirizana- finoana.
Tsy misy ambara betsaka fa dia mahafehy ny lalako ireo, ary mbola izoran'ny hoaviko.
Date: 28 janvier 2016 - 18:22
Raha fitaizana no resahana :
Beazina mba hanana saina tsy mora milavo-lefona sy mab ho < optimiste > ny ankizy. Aza mba ampitahorina na vasovasohina amin'ny zavatra tsy dia misy dikany loatra izany ny zaza fa rehefa lehibe iny zaza iny dia hanana fahasahiranana haneho hevitra sy ilay katahotra tsy mahasaha miatrika fiainana ireny.
Zaro amin'ny lalana tokony alehany ny ankizy e!, Izany no tena fototry ny fahombiazana. Sacrifice kely ny anao aloha mamafy, fa afaka taona maromaro dia hijinja ny vokatr'izay ianao fa hanana zaza vanona. Izany amiko no tena fahombiazana.
Date: 05 février 2016 - 14:32
Ny ahy dia ireto ary tsy miala @ ireto:
- Finoana (Foi en Dieu & Confiance en soi)
- Fahasahiana (Prendre des risques & être optimiste)
- Fanatsaràna ny zava-misy hatrany (Faire de son mieux & faire du progrès & toujours apprendre & viser plus haut et aller plus loin)
Date: 08 février 2017 - 10:04
bjr!daholo ny mpandray anjara !!!
raha resaka fahombiazana no tina apetraka dia mila ny fiainana mitsy alo no apetraka @ MPAHARY NY LANITRA SY NY TANY fa ny ambiny fahaizanan dra olombelona sisa !!!
zay vao manaraka ny
1 mametraka tanjona
tsy marina ny oe vola fahaizana ary relation no voalohany anana vao oe ho tafita eo @ fiainana mety ao iany ireo f ts mitana ny laharana aloha be zany !!!
mbola teo anatrehan dada sy neny t@ zany somary ts de nanana mou ts sahirana fa ao @ antonony !resaka rehabilitation lakozy le izy !!taty aorina vao tsapako oe toy zao no nofisiko taloha f ref tatnteraka le iz vao tonga saina t@ zany za !!
taloha ref manasa tanana teo @ fanasana lovia za d meritreritra oe rovina vao hisy robinet re eto e!sady nataoko mits ny namoha robinet en l'air tena nofy zany a!
tao aoriana kely in1 oe rovina vao hovita carreaux ty fanasana lovia ty f t@ zany le mbola ciment d ra sasana fona dia miha miendaka le iz
fa taty aoriana tanteraka SOAMANTSARA reo nofisiko ireo fa faly za a!zany eo iany tsy ny effort ko manokana t@ zany f nofiko fotsiny f mbola kely
zay no mahatonga ahy miteny ao @ AVO INDRINDRA alo ny zavtr rehetra zay vao mety sy milamina io f ref ts sitrapony kou na in na in tsy mis mahasakana zay tiany hatao !!!mialatsiny f lava loatra !!mirary soa ho antsika rehetra
Date: 16 mai 2017 - 10:52
Tsy misy fahombiazana maharitra azo antenaina raha tsy ao amin'ny valan'ny Mpahary ihany, raha mahay "Magie de transformation" ny zanak'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny tontolon'ny fivoarana izay manimba ny tontolo manodidina azy,dia manana fahefàna manorina fanjakam-panahy tsy azon'iza na iza tohaina hery koa, ny mpiandàny amin'ny Mpahary sy ny teniny (izay ilay fahombiazana).
Date: 18 mai 2017 - 14:31
Ny fahombiazako :
- tsy mba mihemotra izany , rehefa iny misy projet ao an-dohako fa tsy miantsy vitako iny na rahoviana na rahoviana ; mety ho haingana mety ho ela . Fa ny tanjona dia tratra.
Ny tsy fahombiazako : tsy zakako ny tsy ponctuel amin'ny zavatra atao . Izaho ponctuel fa ny manodidina ahy tsy ponctuel , dia stressé aho satria tsy mitovy ny vitesse rehefa manao zavatra , miandry foana . Lasa stress ho ahy ilay izy .
Date: 18 mai 2017 - 14:40
fototry ny fahombiazako:
ts mionona @z vitako fa mitady ny fanatsaran hatrany ary milofo hatrany hatratrarako ny tanjoko
fototry ny ts fahombiazako:
ny enti manana eo ampelatanana, voafetran'io ireo finiavako voateny etsy ambony, hany ka lasa miadam pande ny fahombiazako na ts misy mihintsy
Date: 18 mai 2017 - 16:39
tokony asiana jaime ty hevitra ray ty,fa mafinaritra be zany ahay ka mba forum,misaotra tompoko !
Date: 25 mai 2017 - 20:35
Audace et détermination. Io no hitako tena fototry ny fahombiazana amin'ny fiainana. Indraindray mila provoquer-na koa ny opportunités mba hafahana mivelatra kokoa. Dia indrindra indrindra, ankinina amin'Andriamanitra ny rehetra hatao
Date: 10 août 2017 - 07:41
Ny fanakinana ny fiainana amin'Andriamanitra Mpamorona, dia Izy no manome saina sy manokatra ny làlana rehetra. tsy misy herin'ny tena na dia iray aza.
Date: 14 août 2017 - 16:52
Fa inona aloha ary manao ahoana ny atao hoe mahomby ?
Par: bon sujet
Date: 16 août 2017 - 17:06
misaotra e, mahafinaritra ny fifampizarana
Date: 17 août 2017 - 13:01
valiny: manao forum eto